Factory Tour - Ningbo Sunshine Rubber Oo caaga
W Nile ujeedada " tartami leh tayo wanaagsan iyo horumarinta la-abuurka " iyo mabda 'adeeg ah "ka qaado dalabka macaamiisha sida orientation ", waxaan dadaal ku siin doonaa waxyaabaha u qalma iyo adeegga wanaagsan ee macaamiisha gudaha iyo kuwa caalamiga ah.
" Create Qiimayaasha, adeegaya Customer !" waa Ujeedada aan u eryan. Waxaan rajaynayaa in macaamiisha oo dhan adkayn doonaa muddo dheer ah iyo iskaashiga labada dhinacba anfaca la us.If aad doonayso si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Shirkadda, Fadlan la xiriir nala hadda!
T uu waayo-aragnimo oo duurka ku shaqeeya ayaa ka caawiyay na abuurtay ah xiriirka xoog leh macaamiisha iyo la-hawlgalayaasha labada suuqa gudaha iyo kuwa caalamiga ah. Muddo sanado ah, waxyaabaha our ayaa la dhoofiyay in ka badan 15 dal oo adduunka ah oo la si weyn u isticmaala macaamiisha.
Qaadashada fikradda asaasiga ah ee " in uu noqdo masuul ka ah ". Waxaan u badiso doonaa on bulshada ee wax soo saarka oo tayo sare leh iyo adeegga wanaagsan. Waxaan initiative doonaa inay ka qaybgalaan tartan caalami ah in ay soo saaraha ah fasalka koowaad ee alaabta this ee dunida.
C ertainly, qiimaha tartan rasmi ah, xirmo habboon iyo gaarsiinta waqtiga la xaqiijiyay doonaa sida dalabaadka macaamiisha. Waxaan rajaynayaa in la dhiso xiriir ganacsi oo aad la ku salaysan faa'iidada iyo faa'iido mustaqbalka dhow. Si diiran u soo dhaweyn nala soo xiriir oo noqday cooperators toos ah our.
W e ayaa in ka badan 10 sano waayo-aragnimo dhoofiyo iyo waxyaabaha our ayaa expored in ka badan 30 dal oo erayga. Had iyo jeer waxaan qaban Client rogo oo adeeg ugu horeysay, Quality ugu horeysay ee maskaxdeena, oo way ku adag yihiin tayada wax soo saarka. Ku soo dhawoow aad booqanaya!
P roducts ayaa la dhoofiyo Asia, Mid-bari, suuqa Yurub iyo Germany. Shirkadda Our ayaa si joogto ah ay awood u cusboonaysiiso waxqabadka badeecada iyo amaanka si ay ula kulmaan suuqa iyo ku dadaalaan in ay noqon A top on tayada deggan iyo adeegga daacad ah. Haddii aad qabto sharaf u sameeyo ganacsiga shirkadda our. waxaan xaqiiqo ah samayn doonaa mid aad u fiican si ay u taageeraan ganacsigaaga ee Shiinaha.
" Tayo wanaagsan, adeegga wanaagsan " had iyo jeer waa rogo oo iyo credo. Waxaan qaadan dadaal kasta si loo xakameeyo oo tayo leh, xirmada, shabbadeeysa iwm iyo QC hubin doonaa si faahfaahsan kasta inta lagu guda jiro soo saarka iyo ka hor shixnad. Waxaan doonaya in la dhiso xiriir ganacsi dheer leh, kuwa ku doondoonaya wax soo saarka oo tayo sare leh iyo adeegga wanaagsan yihiin. Waxaan ka dhigay a network iibka balaadhan guud ahaan dalalka Yurub, North of America, South of America, Bariga Dhexe, Afrika, East Asia countries.Please Bal noo soo xiriir, waxaad ka heli doontaa our waayo-aragnimo xirfadeed iyo fasalada tayo sare leh wax uga tari doonaan ganacsigaaga.
H onest macaamiisha walba waxaa naga codsaday! Fasalka-koowaad u adeega, tayada fiican, qiimaha ugu fiican iyo taariikhda bixinta ugu dhaqsiyaha badan waa faa'iido! Sii macaamiisha kasta oo wanaagsan u adeegnaa waa our rogo oo! Taas ayaa ka dhigaysa shirkadda helaan Nicmada macaamiisha iyo taageero! Ku soo dhawoow oo dhan macaamiisha adduunka oo noo soo diri waydiimaha iyo ku hayaa aad wada-shaqayn wanaagsan! Fadlan aad weyddiistay faahfaahin dheeraad ah ama codsi kuwa iibiya gobollada xulay.
O waxyaabaha ugu waaweyn ee shirkadda ur ayaa si ballaaran loo isticmaalo adduunka oo dhan; 80% ka mid ah waxyaabaha aannu dhoofiyo Maraykanka, Japan, Yurub iyo suuqyada kale. Alaabtayda oo dhan si daacad ah guests soo dhaweyn u yimid inuu soo booqdo our warshad.